Wepụtara ọhụrụ version nke GNU Guile 3.0 na ndị a bụ ndị kasị mkpa mgbanwe | Site na Linux
Wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke GNU Guile 3.0 na ndị a bụ mgbanwe ya kachasị mkpa
GNU Guile bu onye ntughari ohuru maka oru GNU, nwere mmejuputa iwu asusu mmemme. Ọghọm na-agụnye ndọtị modular maka ọtụtụ ọrụ mmemme, dịka ịkpọ oku na sistemụ POSIX, n'etiti ndị ọzọ.
Iji gbasaa mmemme ahụ, Guile nwere libguile, ọbá akwụkwọ nke na-enye ohere itinye ya na mmemme ndị ọzọ ma jikọta ya n'ụzọ ziri ezi site na iji mmemme mmemme mmemme nke asụsụ (API) N'otu aka ahụ, ụdị na ụzọ okpuru ọhụụ akọwapụtara site na API a nwere ike ịpụta onye ọrụ dị ka ndọtị Guile.
Na-akwado ike itinye koodu ahụ na ngwa na asụsụ mmemme ndị ọzọ. Enwere ike iji guile dị ka asụsụ iji mepụta ndọtị ngwa, kọwaa nhazi, ma ọ bụ mepụta ihe njikọ iji jikọta usoro ochie dị iche iche nke ngwa ahụ. Guile bụ asụsụ mmepe ndọtị gọọmentị maka sistemụ arụmọrụ GNU.
1 Banyere Gnu Guile
2 Main ọhụrụ atụmatụ nke GNU Guile 3.0
3 Etu esi etinye Gnu Guile 3.0?
Banyere Gnu Guile
Isi nke Guile bụ igwe arụmọrụ dị mma nke na-eme ntuziaka a na-ebugharị ebugharị nke ndị na-ahazi njikarịcha pụrụ iche mepụtara. Igwe mebere Guile na-ejikọta ngwa ngwa na koodu ngwa C na C ++.
Na mgbakwunye na asụsụ Atụmatụ, nke na-akwado nkọwapụta R5RS, R6RS na R7RS, Guile project rụpụtara compilers maka asụsụ ndị ọzọ, dịka ECMAScript, Emacs Lisp, na Lua (na mmepe).
Ebumnuche nke atụmatụ Guile bụ maka onye nrụpụta iji mejuputa algorithms dị oke egwu na nhazi data na C ma ọ bụ C ++ na mbupụ ọrụ na ụdị maka iji koodu atụgharịrị.
Yabụ, atụmatụ atụmatụ aghụghọ, na asụsụ ndị ọzọ nke Guile mejupụtara, nwere ike ịgbatị site na ụdị na usoro ụzọ ọhụrụ emere site na C API.
Ọkọlọtọ nkesa na-enye modulu maka oku POSIX, ndị nhazi oge, interface ọrụ mba ofesi, nkwupụta dabere na nhazi XML site na SXML, SXPath na SXSLT.
Ọ gụnyekwara protocol HTTP yana web API ndị ọzọ, cItinggbachi n'ihu, mmemme vektọ na ọrụ ndị ọzọ. Mmemme edere na Guile nwere ike iji akụrụngwa nke SLIB, Ọbá akwụkwọ ebugharị ebumnuche.
Ihe ngwugwu a gunyere obo akwukwo nke modulu na emejuputa oru ndi ozo, dika oru na HTTP protocol, XML parsing, and ojiji nke usoro ihe eji eme ihe.
Main ọhụrụ atụmatụ nke GNU Guile 3.0
Isi ihe ọhụrụ dị na GNU Guile 3.0 bụ mpụta nke JIT compiler, na mgbakwunye na onye ntụgharị okwu bytecode na nchịkọta, nke e mere na igwe ọrụ pụrụ iche nke ejikọtara na ngwa ahụ n'ụdị ọba akwụkwọ.
JIT na - enye gị ohere igbanye koodu igwe n’igwe ma budata na-agbusi ngwa nke ngwa Guile (ule na-egosi 4x osooso). Ihe nchịkọta JIT na-akwado x86-64, i686, ARMv7 na AArch64 ụkpụrụ ụlọ.
Tambien emeputala ya na agbakwunyere nkwado maka uzo ohuru R7RS Scheme na modulu ọbá akwụkwọ akọwapụtara na ya.
En http-arịrịọ, http-nweta na usoro ndị ọzọ metụtara onye ahịa weebụ, enwere ike ibudata ọdịnaya site na channelụ nkwukọrịta ezoro ezo site na iji TLS agbakwunye na nkwenye ziri ezi nke asambodo.
N'akụkụ nke igwe na-eme omumel Guile, mere ndozi na-akwado bytecode ala dị ala, na-enye gị ohere itinye nyocha kachasị elu.
Nke mgbanwe ndị ọzọ e webatara na ụdị ohuru a:
Nkwado maka ijikọta nkọwa na nkọwapụta dị n'ime (kọwaa _ (bido (foo) #f)).
Mmekọrịta dị n'otu ụdị data ahaziri ahazi («ndia").
Ewezuga njikwa ochie (tụbara na njide) ka emezigharịrị.
Links na-akọwapụtara maka ogologo syntax «Ọzọ«,«=>«,«...« y "_".
Etu esi etinye Gnu Guile 3.0?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye Guile Na sistemụ gị, ị nwere ike ibudata koodu isi nke ngwa ma chịkọta ya.
Maka nke a anyị ga-emeghe ọnụ na ya na anyị na-aga pịnye:
Ugbu a anyị na-aga ikpokọta na:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke GNU Guile 3.0 na ndị a bụ mgbanwe ya kachasị mkpa
Google kwuputara njedebe nke ngwa Chrome na ọ ga-abụ njedebe kpamkpam site na 2022